Fa fiadanana amin'ny ahoana moa e?
2009-12-25 @ 22:40 in Ankapobeny
Nandalo izany fetin'ny Noely na Krismasy izany, hono, isika! Dia nifampiarahaba, hono, ny mpifankalala amin'izao andro iray toa zato izao. Mifampirary soa, hono, mba hanana na hahazo ny fiadanana izay rehetra andefasana ny hafatra. Eo amin'ny samy kristiana te-hampiaina ny ventin-kevitra dia miorina amin'ny hoe hitondra fiadanana ho an'ny tsirairay ilay fahatongavan'ny Tompo. Saingy izao ho'aho ny olana : samy manana ny famaritany ny antsoiny hoe fiadanana ny tsirairay; samy manana izay heveriny ho fiadanany ny isam-batan'olona.
Ao ny mieritreritra fa raha mianoka ao anatin'ny harena izaitratra izy dia izay no antsoina hoe fiadanana. Ao ny misaina fa izy no manankarena indrindra vao atao hoe miadana izy. Ny marary lazohin'ny aretina ny fahasalamany ihany no katsahiny dia mety hahatratra ny fenitry ny antsoina hoe fiadanana izy. Ny mpifatotra rehetra kosa, raha tafavoaka ny fonja izy dia efa fiadanana izay aminy. Ny mpitady vady rehefa mahazo ny tandrifiny vodin-tsobikiny (sa soabika moa no filaza azy?) dia mahazo ny hoe: "He mba sambatra loatra lahy!" Ny mpivaron-drongony, ny mpivarotra toaka gasy, ny mpivarotra paraky gasy sy ireo mpivarotra tsy ara-dalàna rehetra rehefa afa-miasa malalaka amin'ny asa ataony tsy misy mpanelingelina izy, na mandalo eo aza ny mpitandro ny filaminana, toy ny any Ambositra ohatra, dia efa anjara fiadanana ho azy izay. Eo ihany koa ny hoe mba milaoka vorontsiloza amin'ity andro iray ity dia efa karazam-piadanana ihany koa izany.
Etsy ankilan'izany, tsy voatery ho faniriana ho an'ny tena ihany no mety hahazoana ny fiadanana fa amin'ny alalan'ny fifanampiana sy ny fifampitsinjovana ihany koa. Ny ray aman-dreny rehefa mahazo ny kilalao tadiaviny ny zanany sady faly amin'izany, sady mba mitovy amin'ny zanaky ny rehetra rahateo amin'izay lafiny izay dia efa mety hiteraka fiadanana aminy iny izay. Eo amin'ny lafiny fivavahana ohatra, noho ny Soratra manao hoe manao fiantrana isan-joma (ho an'ny Silamo ohatra araka ny fiheverako fotsiny fa tsy fantatro kosa aloha izay tena votoatin'ny lalànany sy ny fombany ka ialako tsiny dieny mialoha) dia manome ny mahantra izy mba hananany ilay fiadanana; ny kristiana indray raha mahatsapa ny hasoan'ny Soratra manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray dia rafitra manantanteraka saingy moa ve ny fanaovana izany no mahasambatra sa izay mahatsiaro sambatra no tsara manao izany mba hananany fahasambarana bebe kokoa? Efa mba manana ny valiny ihany aho fa aleo izay efa nandia izay dingana izay ihany no hahatsapa azy.
Fehiny: tsy ho filozofika be loatra intsony aho fa rehefa mahazo izay irìny iny olona iny dia izay no lazainy fa fiadanany saingy toa mihelina ihany manko izany fiadanana heveriny izany, noho izy miankina kokoa amin'ny fihetseham-po, fa sarotra ny haharetany ho toy ny toetra. Sa izay no mahatonga ilay faniriana hanao hoe : Hitondra fiadanana anie ity andro ity na ny fahatongavan'ny mpamonjy? Sa noho izy mihelina vetivety tokoa no ilazana azy hoe ho krismasim-piadanana no hiainan'ny tsirairay amin'ity andro ity? Koa raha izany ihany no izy, inona ary no manavaka azy amin'ny antsoina hoe revy?
Ka nifaly ve ianareo?
Rehefa mifampirary soa sy mifanatsafa ny olona ka mandeha ny fanontaniana hoe : Ka manao ahoana ny fety? dia mitovitovy hatrany ny valiny, indrindra ho an'ny Malagasy, ka manao hoe manao izay mety eo e! Ny kely ananana no ahiratra. Ny zaza sy ny ankizy no mpamaly hoe mahafinaritra be mihitsy; fa toa voambolana tsy mipololotra loatra amin'ny samy olon-dehibe indray ny toy izany. Ny fifaliana anatin'ny fihaonana noho ny tsy fifankahitana ela eo amin'ny mpianakavy ve moa tsy hisy kosa? Saingy ny fanahiana ny ampitson'ny Malagasy kosa dia manaloka mampatahotra loatra.
Mihamaro dia mihamaro fatratra manko eo amin'ny manodidina ahy, indrindra ho an'ny ankamaroan'ny tanora latsaky ny 40 taona, ny resy lahatra fa tsy ho vita am-pilaminana intsony ity raharaha politika ity. Ny fitakiana ezahina atao am-pilaminana rehetra dia isedrana herisetra, fanagadrana ary famoretana hatrany. Tsoriko kosa aloha fa tena tsy nankasitrahako velively ny nitarihana ny olona hidina an-dalambe indray nefa tsy misy tetika mazava hampahomby izay atao. Heveriko ho tetika hampandamoka ny tadiavin'ny mpitolona eo amin'ny kianjan'ny ara-dalàna ny hitarihana azy ireny horatraina sy hogadraina ato anatin'ity fety ity hanomezana fahasahiranana ny fianakaviana. Ampangaiko ho ao anatin'ny tetika famonoana ny tolona mandrakariva ireo mpampirisika ny olona ho amin'izany fidinana an-dalambe tsy misy fiarovana ny olona mpanaraka azy akory. Misy aza moa ny mpitari-tolona etsy amin'ny ara-dalàna hatramin'izao no ahiahiako mampivily lalana matetika ny tolona imatimatesan'ireo mpandray anjara mavitrika mankeny satria avy aminy matetika ny kabary fampirisihana "hidirana amin'ny dingana sarotra kokoa".
Na ahoana na ahoana ihany koa dia tsy mbola nahitako tombony mihitsy aloha ny fiarahan'ny ankolafy Ravalomanana mitolona miaraka amin'i ankolafy hafa. Rehefa todihina ny tantara dia amin'ny vanim-potoana ilazana ho firaisan'ireo ankolafy ireo hatrany matetika no misedra ratra sy fanenjehana ny mpandala ny ara-dalàna. Ny lesoka lehibe indrindra dia ny fifandaminana. Eo hatrany no fanararaotran'ny olon-kafa miditra hatrao anatiny manao gafigafy hanasoketana ny tolona. Fotoana fanararaotran'ny mpanendaka sy ny voakarama hanapotika ny tolona ihany koa ireny hanaovany ny asa malotony. Lesoka lehibe dia lehibe noho izany ny tsy fisian'ny fifandaminana matotra sy ny fahatahorana mifampiavaka ao anatin'ny fidinana an-dalambe. Ny tena zava-doza tamin'ny tany Tsimbazaza tamin'ity herinandro ity dia tsy nisy mihitsy ny lalam-pandosirana raha misy ny tsy azo anoharana nefa efa fantatr'izay nankeny fa ilay tsy azo anoharana no hitranga kokoa.
Eo ihany koa ny fampidirana ho ao anatina fiaraha-mientana iray ny olona noenjehina sy nanenjika noho ny resaka politika (sy foko na fiaviana) tany amin'ny fotoana efa lasa tany. Na ahoana na ahoana dia miteraka fifampiahiahiana izay manalemy tanteraka ny tolona atao ity toe-javatra iray ity. Famotehana ara-toe-tsaina ny tolona ihany koa ny fahaverezan'ny fifampitokisana eo amin'ny mpiara-mitolona. Heveriko, noho izany, fa tonga amin'ny fenitra farany ny tolona am-pilaminana noezahina notandrovina nandritra izay sivy volana izay; nahavita ny adidiny ireo tsy nitandro hasasarana nizotra nankeny Ankorondrano isan'andro ka ao anatin'izany ny raiko izay sambany indray nanao toy izany taorian'ny 1972. Ny zatra mankeny Ankorondrano resy lahatra hatrany amin'ny fanaovana ny tolona tsy misy herisetra, tafasara-kevitra ny amin'izany kosa ireo izay tsy afa-mankeny intsony ka manao hoe aleo ataon'ny miaramila sy izay vonona ny ambiny ka rehefa tsy hanao ny miaramila dia samia mizaka ny fiantraikany avokoa. Ny mpahalala tantara dia lasa miaina mivantana izay fantany tamin'ny raharaha teto Madagasikara tamin'ny 1947 raha mahita izany toe-javatra izany. Indrisy, toa andalam-panatanterahina ihany ilay tetika ampiadiana ny samy Malagasy izay sarotra inoan'ny be sy ny maro hatramin'izao.
Hitako fa na mbola hisy na tsy hisy intsony ny tolona ataon'ny mbola mazoto hankeny Ankorondrano dia efa mihatra ny loza manamban'ny fipoahana ara-tsosialy ary ho zava-doza kokoa eo amin'izay tsy niomana ny finiavana hikimpy manoloana ity loza manambana ity. Hazavaiko kokoa ny resaka : tsy hoe misy ny tetika hampiadiana ny samy Malagasy fa ny toe-draharaha mihitsy no efa vonona indray amin'ny mety hisian'ny fandrobana mampihoron-koditra kokoa noho izay nitranga tamin'ny voalohan'ny taona 2009. Tsy hianona eo amin'izany fandrobana izany anefa ny resaka fa hiitatra amin'ny valifaty amin'izay ary eo no tena zava-doza. Ho an'izay manakarama mpanakorontana hiarovany ny tombotsoany moa dia mety hivadika aminy ihany ny tetika malotony. Nahamarika ihany koa aho tao am-piangonana fa toa tsy mba nolazaina tao ny hafatry ny krismasy iarahan'ny Ray Aman-Dreny lehibe ao amin'ny FFKM sa tsy nisy intsony izany? Dia tsy heno ve izany ilay fanombohan'ny hafatra Pastoraly mpanao hoe :"Ho aminareo anie ny Fiadanan'ny...Tompo"? Sa efa tsinjon'izy ireo hoe aleo tsy miteny izany fiadanana izany nefa tsy hisy akory izany?
jentilisa, 26 desambra 2009 amin'ny 00:45